STEP Democracy Education
လေးနှစ်တာကာလကုန်လွန်သွားပါပြီ။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) အဖွဲ့အနေဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးသင်တန်းပေါင်း ၂ဝ၁ ခု၊ ပြည်သူ့နီတိပညာပေးသင်တန်းပေါင်း ၇၇ ခုနှင့် လူထုပညာပေးဆရာဖြစ်သင်တန်း ၁ဝ ခုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ရာ ချင်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရှိတဲ့ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ဒေသတွေကို လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ ဒေသခံအဖွဲ့များ၊ Naushawng Development Institute (NDI), Scholar Institute (SI), Hornbill Organization (HBO) နှင့် Myanmar Egress (ME) စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့လုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ ရှေ့သို့မြန်မာအစီအစဉ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။	Read More
More than three years have passed! From 2015 to 2018, 201 Voter Education trainings, 77 Civic Education Trainings and 10 Trainings of Trainers for Community Civic Educators – to be counted – Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) went to exotic places, namely Chin, Kachin, Kayin, Kayar, Mon, Rakhine, Shan, Ayeyarwaddy, Sagaing and Magway, with its local partners, Naushawng Development Institute (NDI), Scholar Institute (SI), Hornbill Organization (HBO) and Myanmar Egress (ME) under the STEP Democracy Project funded by the European Union.	Read More
“ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ဖို့ရာ လူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်” ဟု Scholar Institute မှဆောင်ရွက်သော လူထုပညာပေးရေးနည်းပြသင်တန်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှသင်တန်းသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။	Read More
Myanmar Democracy Fellowship: Explains, connects and inspires
First MDF launched by Democracy Reporting International and Charity Oriented Myanmar	Read More
DIPD – ပှဲလယျတငျ့စရေနျ နိုငျငံရေးသမားမြားကို ပွငျဆငျပေးခွငျး
STEP Democracy ၏ မိတျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားထဲမှ တဈခုဖွဈသော Danish Institute for Parties and Democracy သညျ ပွညျတှငျးရှိ နိုငျငံရေးပါတီမြားကို စှမျးရညျမွှငျ့တငျရေး ကူညီပေးရာတှငျ ကွိုးပမျးလုပျကိုငျလကျြရှိပွီး မကွာသေးမီကပငျ လူထုဆကျဆံရေးနှငျ့ မီဒီယာ ပိုငျးဆိုငျရာ လကေ့ငျြ့သငျကွားရေး သငျခနျးစာမြားပို့ခပြေးခဲ့သညျ။ Read More
မွနျမာပွညျသူမြားအတှကျ ပိုမိုကောငျးမှနျသောမဲဆန်ဒရှငျ အသိပညာပေးသငျတနျးမြားလိုအပျနဆေဲ
ကမ်ဘာ့အမွငျတှငျ ပွီးခဲ့သညျ့နိုဝငျဘာက မွနျမာနိုငျငံ၏ ရှေးကောကျပှဲမှာ အောငျမွငျခြောမှစှေ့ာ ပွီးဆုံးခဲ့သညျ။ သို့သျောမဲပေးခဲ့သညျ့ ပွညျသူမြားက မညျသို့ မွငျကွသနညျး။	Read More